ONLF oo ka haddashay colaad ka soo cusboonatay DDSI – Radio Daljir
ONLF oo ka haddashay colaad ka soo cusboonatay DDSI
Luulyo 7, 2019 4:37 b 0
War-Saxaafadeed kazoo baxay Jabhda Ururka ONLF ayaa waxaa looga hadlay dagaal beeleedyo u dhaxeeya Soomaalida degan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya,kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ka jiray Dowlad deegaanka.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadseedka Ururka ONLF kasoo baxay.
Waxaa jira dagaallo badan oo dhex-maray beelahaSoomaalida Ogaadeeniya oo gaystay waxyeellooyin dhimasho iyo dhaawacba isugu jira, kuwaasoo ka dhashay dhulal la isku haysto. Waxaa sidoo kale jira meelo badan oo la is hor-fadhiyo, lagana cabsi qabo inay dagaallo ka billowdaan, oo u baahan in laga qaado tallaabooyin lagu baajinayo dhiig macnadarro ah ku daata.
Colaadaha beelaha dhexdooda ah waxaa sabab u ah tuulooyin ama dhul deegaan ah oo la isku haysto, waxaana intooda badan raad ku leh siyaasadii taliskii hore ee ahayd abuurista tuulooyin ka turjumaya danaha amni ee taliska ee aan ka turjumaynin danaha bulshada deegaannadaas deggan
.Arrintaasina waxay halis galisay amnigii dalka iyo xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyay beelaha wada-dega ama deriska ah. Waxay sidoo kale khatar ku tahay daryeelka dhulka daaqsinta ah cimilada guud.
Waxaa kaloo lagama maarmaan ah in la hirgeliyo barnaamijyo wacyigalin ah oo dadwaynaha lagu barayosarrayo sharciga iyo in kala-dambayntu ay fure u tahaynabadda iyo horumarka deegaanka ayaa lagu soo geba-gabeeyay Warka kazoo baxay Jabhadda ONLF.
Maamulka Jubbaland oo horjeestey go’aanka doorashada Wasaarada Arrimaha Gudaha
Munaasabad Shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ardey baratay Caafimaad oo lagu Qabtay Caabudwaaq (Daawo)